Yunibarsiitii Adaamaa keessatti yakkoonni Gudeeddii Shamaraa akkasuma shororkaa barataa akka malee daangaa darbee adeemaa jira. Barataan Oromoo ukkaanfamaa jira. « QEERROO
Yunibarsiitii Adaamaa keessatti yakkoonni Gudeeddii Shamaraa akkasuma shororkaa barataa akka malee daangaa darbee adeemaa jira. Barataan Oromoo ukkaanfamaa jira.
December 29, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
[SQ, Mudde 28,2017] Mootummaan wayyaanee jumulaan mooraa barnootaa olaanaatti humna waraanaa naqee jira. Waraanni kunneen yakkoota hammaataaf jallataa akkasuma yakka suukaneessoo barataaf barsiisota moorichaa irratti fudhataa jiru. Akkuma amaleeffatan shamara Oromoo irraan yakka gudeeddii raawwataa jiru. Xiinsammuu barattoota Oromoo irratti dhiphina hamaa naquurratti argamu. Barattoota Oromoo dargaggoota egeree biyyaa barnootarraa qabee ukkaamsuus itti fufee jira. Haalli moorichaa akkanaan saatii hammaataa deemetti barataan Oromoo wabii jireenyaa dhabaa jiraachuun gabaafame.
Tooruma kanaan Barattuu Oromoo kan waggaa 4ffaa mooricha keessa jiraataa jirtu, ammatti gosti qorannaa ishee kan nu hinga’in Daraartuu kan jedhamtu maqaan abbaashee nageemya xiinsammuu isheef kan hingabaafamin irratti bakka ishiin raftee jirtutti halkan poolisii federaalaa itti erguun, foolisoonni kunis doormii ishii deemuun. Seera moorichaan ala akka seera manneen barnootaa olaanaa biyyattiiti dhiirri kamuu doormii shamaraa seenuun dhorkaa ta’ee utuu jiruu, Poolisoonni dhiira Itti seenuun Doormii dhalaa seenanii bakka muchiyyoon raftutti dormii cabsanii gudeeddii irratti raawwatan. Achii booda tumanii gudeeddii safuu biyyattii cabsu dabaree itti furuun yakka jallataa raawwatani. Daraartuun haala ulfaataa keessa galuunis himamee. Yakka ulfaataa irratti raawwatame damdamachuu kan dadhabde Ammaan tana Daraartuun hospitaala jeneraala Adaamaatti oldhaanamaa jirti. Dhalaan biraas akka karaa irratti poolisoota kanaan gudeedamtes dhagayamee jira. Yakka Gudeeddii baroota dheeraaf raawwataa ture mootumaan biyyattii Foolisoota isaa akka waan jallataa kana raawwataniif bobbaaseera. Waggoottan hedduus shamarran Oromoo yakkoota kanaan dararamaa turaniiru. Yakka ulfaataa raawwataa jiraniifgaafatamoo ta’uu gabaasaan keenya ifa go
Mooraan Yuunibarsiitii Adaamaa Ammaan dura barattoota torba ari’ee kan ture yoo ta’u, dhiibbaatiin barnootatti deebiseera. Ammaas dheengadda barattoota Oromoo polisoonni ukkaamsanii fudhataanii jiran. Poolisoonni halkaniin doormiitti itti ol dachaa’anii meeshaa isaanii eega sakatta’anii booda kompiitara isanii wajjii fudhatanii deeman.
Kanneen keessa barataa Abdataa Jamaal,
Gurree kan jedhaman barataa oromoof mooraan barnootaa dirree waraanaa lubbuu qaalii Itti dhaban ta’aa jira. Barataan haamilee ittiin nagaan ba’ee galu dhaneera. Haali li moorichaa suukessaa ta’uu gabaasan
Waraanni wayyaaneen mooraa barnootaatti lakkifte kun barattootaa qofaa utuu hintaane barsiisota akka malee dararaas jiru. Wanni yaadddessa guddoon eenyu akka univarsiticha bulchaa jirullee hin beeynu. Poolisiin federaalaa guyya guyyaan barataa dararaa oola. Dormii seenaniii barataa gadi baasu daree qabaatanis dhiisanis daree seenaa ta’aa jedhu.Gidiraa keessa barataa galchaa gochaa oolu. Wanna barbaadan dalagu. Kilaashiif boombii baatanii dareetti ol seenu. Barsiisotaaf hojjettootalle ni abaaru ni shororkeeysu.
Duuchaatti Bulchiinsi univarsitichaas waan hamtuu dalaguutti jira. Barattootatti poolisii federaalaa dhibbaa ol itti diranii ofiif boqotu. Sagalee barataa ukkamsaa jiru. Dhimmi barattoota gudeedamanii, tumamaniif hidhamaniifaan akka ifa hin bane dhorkaa jiru.Kanaaf maatiin barattootaa haala ilmaan isaanii keeyssa jiran qaceellootti gaafatanii hordofuu qaban.
« Hidhamtoota Siyyaasaa Galmee Oliyaad Baqqalaa Jalatti Himataman Irratti manni Murtii Xoophiyaa Beellama Dheeraa Fudhate.
SQ-Sagalee Qeerroo Bilisummaa Mudde 28, 2017 »